PFSense နဲ့ပက်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါဦး .. - MYSTERY ZILLION
PFSense နဲ့ပက်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါဦး ..
March 2010 edited January 2011 in Linux Server
OpenBSD ကထုတ်တဲ့ PFsense Project ပေါ်မှာ Squid ကို ပြန်ထိုင်ထားပါတယ် .. Cache Mem: ကို 2GB ပေးထားပါတယ် .. Cache on Disk ကို 40000 MB ပေးထားပါတယ် Parent poxy (203.81.**.** ) ပေးထားပါတယ်..
တစ်ခုသိချင်တာက .. Client Borwser တွေမှာ Squid Proxy ပေးသုံးတာနဲ့ .. Parent Proxy(203.81.**.**) ကို ဒဲ့ပေးသုံးတာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် .... Parent proxy နဲ့ သုံးတာကပိုမြန်နေသလိုပဲ ..... ဘယ်ဂလို ဘယ်ဂလို လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို linux Helper များ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး ဗျာ :cool:
squid က သုံးရင်းနဲ့မြန်လာပါတယ်။ cache အပြည့်အစုံအလုပ်မလုပ်သေးတာလို့ထင်ပါတယ်။
ဒူမှလဲ ဆွေးနွေးမပေးဘူး.. ဟွမ့်.. :angry
မသိကျလိုနေမှာပေါ့... ဟုတ်တယ်မလား.. စိတ်အဆိုးရ၀ူးလေး .. :d
OpenBSD ကို တစ်ခါမှ မသုံးဖူးတဲ့အတွက် မသိပါ။
If you want to see the squid server is caching web contents,type below command on server root access,
"tail -F /var/log/squid/access.log"
The linux Squid cache suppose to be 512 MB only,it would be good enough for small size caching for internet proxy.If using 2GB cache,you wouldn't see any good performance.
Regarding about parent proxy,local squid server should be pointed to parent proxy ip address (203.81.**.** ) on squid config file.Using stable and latest squid version will be highly recommanded.Sometime when link congested you may see squid error(such as DNS error)you may need to restart squid service and network service to stabilize and resume connection.
ဟုတ်ကဲ့ ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ .. PFsense က Access log တွေကို tail -f နဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူး ။ သူက Browser base Conf မို့ပါ ။ ခုတော့ မသုံးတော့ပါဘူး Fedora ဒါမှမဟုတ် CentOS ပေါ်မှာပဲ Squid ထိုင်ပြီး သုံးပါတယ် ။ NAT အတွက် iptables သုံးပါတယ် ။ အဆင်ပြေပါတယ် ။ linux proxy sever ကို အရမ်းသဘောကျ တဲ့အချက်ကတော့ SSH သုံးပြီး ရောက်လေရာအရပ်ကနေ Edit လှမ်းလုပ်နိုင်တာပါပဲ။ :cool:
PFsense က Access log တွေကို tail -f နဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူး ။ သူက Browser base Conf မို့ပါ
it'saworng reason
u can use ssh
PFsense is ssh ready. pls On
and then using windows from SSH client (putty) or Linux form Terminal
á€¡á€¬á€á€®á€šá€¬ wrote: »
linux proxy sever ကို အရမ်းသဘောကျ တဲ့အချက်ကတော့ SSH သုံးပြီး ရောက်လေရာအရပ်ကနေ Edit လှမ်းလုပ်နိုင်တာပါပဲ။ :cool:
ရောက်လေရာအရပ်ကနေ edit လှမ်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဆိုင်အတွက် ISP ကပေးထားထားတဲ့ static ip နဲ့၀င်တာလား . .ကျွန်တော်တို့လို DHCP ip နဲ့လိုင်းတွေကောရလား . .
Pfsense နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံစာအုပ်တွေလိုချင်ပါတယ် .
ကျတော်လဲ pfsense version 2.0 ကနေ 2.0.3 ထိ squid တင်တာမရဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူးဗျ သိသူများပြောပေးကြပါဦး
Under the same ISP , can access pfsense by ssh but. different can't access if you have public
you can access pfsense anywhere
OpenBSD ကထုတ်တဲ့ PFsense Project ပေါ်မှာ Squid ကို ပြန်ထိုင်ထားပါတယ် .. Cache Mem: ကို 2GB ပေးထားပါတယ် .. Cache on Disk ကို 40000 MB ပေးထားပါတယ် Parent poxy (203.81.. ) ပေးထားပါတယ်..
တစ်ခုသိချင်တာက .. Client Borwser တွေမှာ Squid Proxy ပေးသုံးတာနဲ့ .. Parent Proxy(203.81..) ကို ဒဲ့ပေးသုံးတာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် .... Parent proxy နဲ့ သုံးတာကပိုမြန်နေသလိုပဲ ..... ဘယ်ဂလို ဘယ်ဂလို လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို linux Helper များ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး ဗျာ :cool: